December 14, 2017 - TV Annapurna
समानुपातिक तर्फ राति ११ बजे आयो यस्तो मतपरिणाम (विस्तृतमा)
December 14, 2017 TV-Annapurna
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको जारी मतगणनामा नेकपा (एमाले) को अग्रता कायमै छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार एमाले २९ लाख १२ हजार ९ सय ३३ मतका साथ पहिलो स्थानमा छ। एमालेलाई पछ्याउँदै नेपाली काँग्रेसले २८ लाख २८ हजार ५ सय ५ मत ल्याई दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ। त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ११ लाख ७० हजार ४ सय ५० मतसहित तेस्रो स्थानमा छ भने चौथो स्थानमा रहेको संघीय समाजवादी फोरमले ३ लाख १३ हजार ९ सय ५६ मत पाएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले…
समानुपातिकतर्फ एमालेको अग्रता कायमै, कुन दलले कति मत पाए ? (विस्तृतमा)
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको जारी मतगणनामा नेकपा (एमाले)को अग्रता कायमै छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो मत परिणामअनुसार एमाले २८ लाख ९९ हजार ३३३ मतका साथ पहिलो स्थानमा छ। एमालेलाई पछ्याउँदै नेपाली काँग्रेसले २८ लाख १७ हजार ९३० मत ल्याई दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ। त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ११ लाख ६६ हजार ३९५ मतसहित तेस्रो स्थानमा छ भने चौथो स्थानमा रहेको संघीय समाजवादी फोरमले चार लाख १३ हजार ८७० मत पाएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० नेपालले तीन लाख ७१ हजार १३, विवेकशील साझाले एक लाख ९४ हजार…
ब्लड क्यान्सर पीडित बालिकालाई आर्थिक सहयोग
ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. ले सहयोगी हात बढाऔं, जीवन बचाऔं आर्थिक सहयोग कार्यक्रममार्फत अस्पतालमा उपचार गराई रहेकी ब्लड क्यान्सर पीडित बालिका क्रिस्टिना भण्डारीको जीवन रक्षार्थ दुई लाख ७ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । विहिवार आयोजित कार्यक्रममा हस्पिटलका अध्यक्ष डाक्टर भोला रिजाल र हस्पिटलका संचालक तथा ओम हेल्थ क्याम्पसका अध्यक्ष विजय मल्लले भण्डारीका बुबा कृष्ण भण्डारीलाई उक्त आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु भयो । हस्पिटल संचालकहरु, चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको सहयोगमा संकलित रकम कमजोर आर्थिक अवस्था भएका भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । कार्यक्रममा हस्पिटलका अध्यक्ष डाक्टर भोला…
राजविराज । प्रहरीले सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा कीर्ते नागरिकता बनाउने गिरोहलाई पक्राउ गरी बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्वारा राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले राजविराजस्थित राजरंगशालामा कीर्ते नागरिकता बनाइरहेको सूचना प्राप्त भएलगत्तै सो गिरोहलाई पक्राउ गर्न सफल भएको बताए । कीर्ते नागरिकता बनाउने कार्यमा मुख्य संलग्न सर्लाही, ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–७ निवासी तथा हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करारमा सहयोगी अजयकुमार यादव र सप्तरी, महदेवा गाउँपालिका–१ निवासी तथा राजविराज नगरपालिका–१० का वडासचिव मो वकिल मियाँ रहेको प्रहरीको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतको नक्कली हस्ताक्षर, जिल्ला…
रौतहटमा समानुपातिक तर्फ कुन दलको कति मत ?
December 14, 2017 December 14, 2017 TV-Annapurna
अखिलेश यादव, रौतहट । रौतहटमा समानुपातिक तर्फको मतगणना सम्पन्न भएको छ । रौतहटको सदरमुकाम गौरको जुद्धउच्च माध्यमिक विद्यालयमा भएको मतगणनामा नेपाली काँग्रेस लाई सबैभन्दा बढि मत परेको छ । प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक तर्फ गणना हुदा नेपाली कांग्रेसले ५५ हजार ५ सय १८ मत प्राप्त गरेको छ । एमालले ३८ हजार ८ सय १८, राजपा नेपालले ४१ हजार ३, माओवादी केन्द्रले ३३ हजार २ सय ७०, सघिय समाजवादी फोरमले २५ हजार ३ सय ६४ मत पाएको छ । यस्तै नेपाल संघिय समाजबादी पार्टीले ४ हजार ७ सय १८, बहुजन शक्ति…
किन कमजोर भए प्रदेश नं २ मा ठूला दल (विस्तृतमा)
काठमाडौँ | प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले देशव्यापीरुपमा दुई तिहाइ स्थानमा विजयी हासिल गरे पनि प्रदेश नं २ मा भने सोचेजस्तो नजिता निकाल्न सकेन । वाम गठबन्धन जस्तै नेपाली काँग्रेसको अवस्था पनि उक्त प्रदेशमा राम्रो रहेन । तर मधेश केन्द्रित दलले गतिलै पुनरागमन गरे । कूल ३२ प्रतिनिधिसभा र ६४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा उक्त प्रदेशमा प्र्रतिनिधिसभा सदस्यमा संघीय समाजवादी फोरमले नौ र राष्ट्रिय जनता पार्टीले १० स्थानमा विजयी भए । वाम गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा (एमाले) दुई र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पाँच तथा काँग्रेसलाई छ स्थानमा मात्रै चित्त…
राति साढे ८ बजे बाहिरियो समानुपातिकको मत परिणाम, कुन दलले कति ल्याए ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको पछिल्लो मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार नेकपा (एमाले) को अग्रता कायमै रहेको छ । राति साढे ८ बजेसम्म २८ लाख ९५ हजार ८ सय ०६ मत, नेपाली कांग्रेसले २८ लाख १३ हजार ६ सय ८७, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ११ लाख ६२ हजार ७ सय ६९, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ४ लाख १२ हजार ३ सय ९० मत प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ३ लाख ६६ हजार ३ सय ६५, र विवेकशील साझा पार्टीले १…
समानुपातिकमा एमाले पहिलो, विवेकशील साझाले माओवादी केन्द्रलाई उछिन्यो
काठमाडौँ। काठमाडौँ जिल्लाको समानुपातिक तर्फको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । परिणाम अनुसार प्रतिनिधिसभा तर्फ एमालेले १ लाख ३२ हजार ८०४ मत पाएर पहिलो भएको छ भने कांग्रेसले १ लाख १० हजार ७८९ मत पाएर दोस्रो भएको हो। राजधानीमा माओवादी केन्द्रलाई विवेकशिल साझा पार्टीले उछिनेको छ । साझाले ५३ हजार २९४ मत पाएर तेस्रो भएको छ भने माओवादी केन्द्रले २९ हजार ३११ मत पाएको छ । त्यस्तै प्रदेशभा तर्फको समानुपातिकमा पनि एमाले नै पहिलो स्थानमा रहेको छ । एमालेले १ लाख २३ हजार ७३९ मत पाएको छ । भने…
आफ्नै श्रीमतीको हत्यारालाई जन्मकैदको फैसला
सुर्खेत । श्रीमतीको हत्यामा संलग्न एक जनालाइ सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाईएको छ। जिल्ला अदालत सुर्खेतले गुर्भाकोट–२ का टेकबहादुर कामीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । कामीले भदौ २५ मा श्रीमती पञ्चकलीको हत्या गरेका थिए। जिल्ला अदालका न्यायाधीश ध्रुवकुमार शाहको एकल इजलासले बुधबार कामीलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। ‘ भदौ २५ गते सल्यानको कालिमाटी मन्दिरमा बोको पूज्नका लागि श्रीमतीलाई लगेर गएका विकले गुर्भाकोट–२ को घारीखोलामा पुगेपछि पञ्चकलीको हत्या गरेका थिए। पछ्यौराले घाँटीमा बेरेर हत्या गरेपछि टेकबहादुरले घारीखोलाको उचाल ढुंगामा माटोले पुरेको अवस्थामा प्रहरीले शव बरामद गरेको थियो । पञ्चकलीको हत्या लगत्तै…
सिन्धुलीमै खुल्यो राष्ट्रियस्तरको फिल्मी स्टूडियो
अभी लामिछाने, सिन्धुली । गीत संगीत गाउने र म्यूजिक भिडियोहरु बनाउने भन्ने बित्तिकै विशेष रुपमा काठमाण्डौं नै जाने प्रचलन बढिरहेको बेलामा अब नेपाको मध्यविन्दुको शहर मानिने सिन्धुलीमा राष्ट्रिय स्तरको फिल्म स्टुडियो खलेको छ । पर्यटकीय शहरको रुपमा विकसित हुँदै गरेको जुनारको जिल्ला भनेर चिनिने सिन्धुलीमा नै अब राष्ट्रिय स्तरको फिल्म स्टुडियो खुलेको हो । आज विशेष उद्घाटन भएको तारा सितारा प्रोडक्सन नामले निर्माण भएको स्टुडियोका निर्देशक कृष्ण पौडेल हुनुहुन्छ । विगत एक दशकदेखि नेपाली चलचित्रमा विभिन्न रुपले काम गर्नुभएका कृष्ण पौडेलले आफ्नै लेखन तथा निर्देशनमा नेपाली कथानक चलचित्र धून निर्माण…